WA State Licensing (DOL) Official Site: Hakinta Adeegga Shati siinta Xirfadaa iyo Ganacsiga
Hakinta Adeegga Shati siinta Xirfadaa iyo Ganacsiga
Cusboonaysii: 5 galabnimo Abriil 15, 2022
Nidaamka ruqsadaha shaqada dib ayuu hawada ugusoo laabtay
Laga bilaabo Maarso 1, 2022, laanta ruqsadleeyda ee nidaamka ruqsad siinta Xirfadleeyda ee Department of Licensing (DOL) ayaa dib ugusoo laabtay adeegga oonleenka. Macaamiishu uma baahan doonaan inay buuxshaan foomka cusboonaysiinta ayna u diraan Waaxda Ruqsadaha. Shaqsiyaadka ayaa hadda cusboonaysiisan kara ruqsadahooda shaqada, waxayna ka codsan karaan ruqsadaha cusub ee shaqada, barta oonleenka ah.
Si loo dhawro badqabka iyo amaanka xogta macaamiisheena, DOL ayaa damisay barta oonleenka ah Janaayo 24, 2022, markaas oo DOL ay ogaatay fal laga shakiyay oo la xariiray kaydka xogta ruqsada shaqada.
Kahor intaan dib loo furin adeegga barta oonleenka ah, DOL ayaa samaysay baaritaan adag ayadoo kaashanaysa khabiir dhanka amaanka kumbuyuutarada oo heer qaran laga aqoonsan yahay, adeeg bixiyaasha qaybta ka ah dhaqan gelinteeda iyo haynteeda iyo Washington Technology Solutions (WaTech). Sharci fulinta ayaa sidoo kale arinta lagu wargeliyay. Xiligaan, waxaan kalsooni ku qabnaa in qaybta ruqsadlaha ee nidaamka ruqsada shaqada ay u shaqaynayso qaab amaan ah aana sii wadi doono la socoshada xaalada si dhow.
Lama helin fal laga shakiyo oo loo gaystay nidaam kale oo kasta oo DOL ay maamusho, ayna ku jiraan nidaamka ruqsada darawallada iyo gaadiidka, kuwaasoo dhammaan si dhow aan isha ugu hayno.
Waxaan sii wadaynaa baaritaankeena ku aadan qaybta kamid ah nidaamka ee falku ka dhacay iyo qaabka uu u dhacay. Waxaan xog joogto ah ka bixin doonaa marka aan helno xog dheeraad ah.
Hal dookh oo kamid ah barta ruqsadlaha, oo loo yaqaano Pay by Employer (Lacagta uu Baxsho Loo Shaqeeyaha), ayaan wali shaqo bilaalbin. Dookhaan waxaa adeegsada xirfadlayaal dhawr ah, sida ilaalada amaanka. Shaqsiyaadka u baahan inay cusboonaysiiyaan ruqsadahooda waxay la xariiri karaan barnaamijkooda shaqada.
Si aan u yarayno saamaynta ku dhacaysa ruqsadleeyda ay dhaceen ruqsadahoodu intii aan hawada ka maqnayn, DOL waxay si otomaatig ah meesha uga saaraysaa ganaaxyada dib u dhaca codsiga anagoo gaarsiinayna ilaa Abriil 1, 2022.
Waraaqaha ogaysiiska ayaa la dirayaa
Baaritaanka DOL ayaa ogaaday in xogta gaarka ah ee ku jirta diiwaanka DOL ee ruqsada shaqada ama ganacsiga uu gacanta ku dhigay qof aan fasax u haysan. Xogta saamayntu gaartay waxaa kamid noqon kara magacyada, ciwaannada iimeelka, lambarada Social Security, Taariikhaha Dhalashada iyo/ama lambarada ruqsada darawalka ee ruqsadleeyda.
DOL waxay aad u ilaalinaysaa amaanka xogta gaarka ah ee ruqsadleeydu nagu aamineen. Markay hayd Febraayo 25, 2022, wakaalada ayaa biloowday inay waraaqaha ogaysiiska u dirto ruqsadleeyda saamayntu ku dhici kartay. Waraaqaha waxaa ku jira tilmaamo faahfaahsan oo ku aadan sida lagu helaayo dabagalka xogta ee lacag la'aanta ah. Fadlan ha ilaawin waqtiga loo cayimay, kaasoo wixii ka danbeeya aadan sii heli doonin xog ilaalinta bilaashka ah. Waqtigaas cayiman waa Maayo 24, 2022.
Wac lambarka taleefanka xarunta ee laga heli karo su'aalaha la xariira shaqada.
DOL waxay bixinaysaa taageero ku aadan su'aalaha la xariira la socoshada hawsha aan bixinayno si aan uga jawaabno xaalada.
Wixii su'aalo ah oo la xariira ilaalinta xogta
Saacadaha shaqada: 8 a.m. – 5 p.m. Waqtiga Baasifiga, Isniin – Jimce
Maxaa is badalay?
Ma waxaa jiray gelitaan aan la ogolayn oo lagu galay xogta DOL ah?
Macluumaad noocee ah ayaa la galey?
Maxaad ka samaynaysaa si aad aniga iyo macluumaadkayga/xogtayda shakhsi ahaaneed u ilaalisaan?
Maxaa dhici doona hadii uu dhaco shatigu inta aanu shaqaynaynin websaytka shatiga Xirfadlaha iyo Ganacsigu?
Waaxda Shatiyada (DOL) kaliya masoo saarto Shatiyada dareewalada iyo gaadiidka. Waxay sidoo kale soo saartaa 39 nooc oo shatiyo ganacsi iyo xirfadeed, oo ay ku jiraan waxyaabaha la isku qurxiyo, dilaaliinta guryaha, dadka ka shaqeeya damaanada, ingineerada dhismayaasha iyo macalimiinta dugsiyada tobobarka dareewalada.
DOL waxay haysataa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee shatiyada xirfadda iyo shaqada oo ugu jira nidaamka oo loo yaqaan Nidaamka Macluumaadka Shatiyada iyo Shuruucda Intarneerka ah ee Xirfadlaha (Professional Online Licensing and Regulatory Information System, POLARIS). Waxaa macquul ah inaad ku taqaano magaca guud ee nidaamka oo ah, "Nidaamka Shati Siinta Xirfadda iyo Ganacsiga" 23 xirfadle oo kala duwan, nidaamku waxa uu ka shaqeeyaa, soo saaraa oo uu dib u cusboonaysiiyaa codsiga shati, aqbalaa cabashooyinka shacabka ee dadka sita shatiga, iyo waxyaabo kale oo badan. Nidaamka shatiga xirfadeed waxa uu ka caawiyaa dadka shatiga haysta inay la socdaan xaaladooda shatiga iyo wixii shuruuda ah ee ay u baahan karaan si ay u buuxiyaan. Nidaamku waxa uu sidoo kale u ogolaadaa shaqaalaha shatiga inay u diyaar ahaadaan ka caawinta macaamiisha dhamaan baahiyahooda shatiga, oo waxay u sahashaa shacabka inay arkaan xaalada shatiga qofka.
Todobaadka Janaayo 24, 2022, DOL waxay ogaatay inay jiraan hawlo laga shakiyo oo macluumaadka (xogta) shatiga xirfadlaha iyo shqada ah ee ku jira Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga. DOL waxay markiiba xidhay nidaamka oo waxay bilawday baadhitaan iyada oo gacan ka heleysa Xaalalka Tiknoolijiyada Washington (WaTech). Sidoo kale, DOL waxa ay heysata qaabirada loogu aqoonsan yahay qaran ee amaanka kombuyuutarada oo ka jawaaba dhacdada. Waxaa la ogeysiyey fuliyasha sharciga.
Qaybta nidaamka ee macaamiishu ay ka codsan karaan ayna ka cusboonaysiisan karaan ruqsadaha shaqada ayaa dib loo furay Maarso 1, 2022. Dib u eegis amaan oo adag ayaa lagu go'aanshay in qaybtaan aysan kamid ahayn meelaha tuugadu gashay, waxaana ku kalsoon nahay in dib usoo gelinteeda oonleenka aysan wax xog ah fashili doonin.
Haa. iyada oo aanu ka duulayno baadhitaankeena, DOL waxaa jira sababo ku qanciyay in la geley Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga oo duwaano lagala baxay iyada oo aan ogolaanshe loo helin.
Baadhitaankeena waxaa lagu ogaaday in macluumaadkaaga xasaasiga ah laga yaabo inuu saameeyay, DOL way kusoo ogaysiin doontaa. Wakhti xaadirkan, waxa aanu ku qiyaasnaa in 650,000 oo ruux ay saamaysay.
Baadhitaankeena sidoo kale waxa uu meesha ka saaray suuragalnimada in dhacdadu saamaysay nidaamyada kale ee DOL, sida nidaamka shatiyada dareewalka iyo gaadiidka (DRIVES). Marka taas laga tago, waxa aanu weli wadnaa baadhitaanka dhamaan nidaamyadeena si taxadar leh.
Macluumaad shati xirfadeed oo noocee ah (xogta) ayay DOL uruurisaa?
Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga waxaa lagu kaydiyaa macluumaadka ku saabsan Shati sitaha iyo codsadayasha. Nooca macluumaadku way ku kala duwan yihiin noocyada shatiyadu. Qeybaha macluumaadka qaar waxaa kamid ah lambarada sooshaal sekuuritiga, taariikhdaha dhalashada, lambarada shatiga darawalada, iyo macluumaad kale oo sheegi kara haybta.
In kasta oo noocyada gaarka ah ee macluumaadka ee ku jira nidaamkeenu ay ku kala duwan yihiin shakhsiyaadka kuwaas oo ku salaysan yahiin nooca cida shatiga sidata, diwaanadeena waxaa ku jira macluumaad xasaasiyadeed sida lambarada sooshaal sekuuritiga, lambarada shatiyada iyo taarikhda dhalashada. Waxa aanu ogaysiin doonaa oo aanu siin doonaa kaalmo qof kasta oo macluumaadkiisa xasaasiga ahi uu ku jiro Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga oo ay dhici karto in la geley. Shakhsiyaadka ku jira shatigeena dadka shatiga shaqaynaya sita; shakhsiyaadka qaar, tusaale ahaan, haysta shati dhacay, lagala noqday iyo mid shaqada laga hakiyay; iyo shakhsiyaad kale oo heshiis kula jira ganacsiyada shatiga haysta.
Waxaa nagu wayn sirtaada iyo amaanka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee aadka qatarta u ah. Markii aanu sidaa u ogaanay hawsha aanu ka shakinay ee Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga, waxa aanu si kumeel gaadh ah u xidhnay nidaamka. Waxa aanu bilaabaynaa nidaamka wargelinta dadka ay dhici karto inuu saameeyay oo waxa aanu siineynay dhibco la socod oo waxa aanu u sheegeynaa qaabka la iskaga ilaaliyo xatooyada.
Khabiiradeena macluumaadka tiknooloojiyada waxay ka shaqaynayaan sidii loo xaqiijin lahaa in nidaamkeenu uu yahay amaan ka hor inta aan dib loo furin websaytkeena. DOL waxay sidoo kale qaaday talaabooyin ay ku yaraynayso khatarta dhacdooyinka noocan ah si ayna u dhicin mustaqbalka iyada oo dhaqan gelinaysa ilaalo teknooloojiyadeed oo dheeraad ah iyo awood lagula soconayo nidaamka.
Maxaan samayn karaa iminka hadii aan warwarsanahay?
Hadii baadhitaankeena lagu ogaado in macluumaadkaaga xasaasiga ah ay dhici karto inuu saameeyo, waanu ku ogaynsiin doonaa oo waxa aanu ku siin doonaa macluumaad dheeraad ah iyo kaalmo wakhtigaas.
Wakhti xaadirkan, hadii aad haysato shati xirfadeed oo ay ku siisay DOL oo aad ka warwarsan tahay amaanka macluumaadkaaga xaasiga ah, waa kuwan talaabooyin uu qaadi karo shakhsi kastaa:
Ka digtoonow – Waxa aanu kugu dhiiri gelinaynaa inaad ka digtoonato oo aad la socoto warbixinta akoonkaaga iyo warbixintaha dayntaada.
Waxa aad isku daydaa inaad geliso faylkaaga dhibcaha digniinta xatooyo ama joojinta amaan – Xafiisyada dhibcuhu waxay leeyihiin agab aad u isticmaali karto si aad u ilaaliso dhibcahaaga, oo ay ku jiraan digniinta khiyaano iyo amaan joojinta.
Ka warbixi hawlaha laga shakiyo – Hadii aad u aragto in aad dhibane u tahay khiyaano ama xatooyo hayb, waxa aad bilayska gaadhsiisaa warbixin oo waxa aad ka heshaa nuqul warbixinta ah si aad ugu gudbiso cida dhibcaha ku siisa iyo dadka kale ee kaaga baahan cadaynta danbe si aad diiwaankaaga uga masaxdo. Warbixinta waxaa sidoo kale kamid noqon kara inaad gasho adeegyada sida bilaashka ah loogu ogaado dhibanayaasha xatooyada.
Waa maxay khayraad kale oo dheeraad ah ee aan heli karo aniga?
Khayraadka aad dhibcahaaga ku ilaalinayso waxaa kamid ah Xafiiska Gobolka Washington ee Xeer Ilaaliyaha Guud (Washington State Office of the Attorney General) https://www.atg.wa.gov/credit-reports Gudida Ganacsiga Federalka (Federal Trade Commission) https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft. Adeega Dakhliga Gudaha (Internal Revenue Service) sidoo kale waxa uu bixiyaa qaabab lagaaga ilaalinayo khiyaanada xaraynta cashuurta.
Hadii aad aragto wargelin anaga naga soo baxday oo sheegeysa inay macquul tahay in macluumaadkaaga la jabsaday, waxaa lagu siin doonaa tilmaamaha sida aad uga shaqaysiinayso dhibcaha bilaashka ah ee kormeerka.
Talaabooyin noocee ah ayaa la qaaday si loo ilaaliyo Nidaamka Shatiyada Xirfadda iyo Ganacsiga?
Janaayo 24, 2022, waxa aanu si kumeel gaadh ah u xidhnay nidaamka shatiga xirfadda si aanu u ilaalino dadka haysta shatiyada xirfadda iyo shaqada inta aanu wadno baadhitaanka. Waxa aanu ka shaqaynaynaa sidii aanu u ilaalin lahayn nidaamka si markaa DOL ay usii wadi karto inay u adeegto xirfadlayaasheeda iyo dadka haysta shatiyada shaqo inta sidoo kale la ilaalinayo macluumaadkooda.
DOL ma ganaaxi doonto dadka, ama ma ciqaabi doonto hadii ay cusboonaysiisan waayaan shatiyadooda inta uu xidhan yahay. DOL waxay mudnaanta siin doontaa dib u cusboonaysiinta oo ku salaysan taariikhda ay shatiyadu dhacayaan.